Ụlọ Steam Sauna Room Jiri ihe ndị na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ Sauna Jiri Ịkụcha,PTC Ngwusi egwu maka Sauna Room,Onyinye Na-ekpo Ọkụ Na Na Na Na Sauna
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Na-egosi ihe nkiri sauna > Ụlọ Steam Sauna Room Jiri ihe ndị na-ekpo ọkụ
Nkà na ụzụ ọhụrụ nke ihe ọkụkụ. Ụzọ ka mma maka saa ọkụ. Mkpụrụ akwụkwọ carbon crystal, nke nwere ezigbo ụzarị ọkụ nke na-egbuke egbuke, nke nwere ike ịbanye n'ime ahụ gị ma mee ka ọbara gbasaa . Ezigbo maka ọtụtụ ụdị ojiji. N'ihe dị ọhụrụ na teknụzụ dị na Puku (PTC), ọ bụ nduzi onwe onye, ​​ọ dị mma n'enweghị nsogbu ọ bụla . Ihe akuku akuku nke okpukpuchi nke di iche na kpo oku, nke mere ka a zoputa ya.
Ejikwala ngwaahịa anyị na-arụ ọrụ CE, RoHS, Ul, ETL. OEM ọrụ dị, a nabatara atụmatụ nke gị.
Ụlọ Sauna Jiri Ịkụcha PTC Ngwusi egwu maka Sauna Room Onyinye Na-ekpo Ọkụ Na Na Na Na Sauna PTC Sauna Room Ịkụcha Ụlọ Ịkụcha Ụlọ Ụlọ Ọrụ Sauna Ụlọ Ọkụ Ụgbọaka aka ọkụ Ụlọ ihe dị ọkụ